आइतबार मे 23, 2021 |
आइतबार मे 23, 2021
वर्ण पाठ: भजनसंग्रह 19 : 7
“"परमप्रभुका शिक्षाहरू अतिऊत्म् छन्।"”
उत्तरदायी पढाइ: भजनसंग्रह 34: 1-4	∙	हितोपदेश 16: 17
1 हर समय म परमप्रभुलाई धन्यको भन्छु। उहाँको स्तुति निरन्तर मेरो ओंठमा हुनेछ।
2 नम्र मानिसहरू! सुन र खुशी बन। मेरो प्राणले परमप्रभुको विषयमा घमण्ड गर्दछ।
3 परमप्रभुको स्तुति मसँग गर र हामी मिलेर उहाँको नाउँको सम्मान गरौं।
4 म परमेश्वरको संगत पाउनलाई उहाँकहाँ गएँ। अनि उहाँले मलाई उत्तर दिनुभयो। मेरा सब डरहरूबाट उहाँले मलाई बचाउनु भयो।
1. व्यवस्था6: 4, 5
4 हे इस्राएली, सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ।
2. हितोपदेश 15 : 32
3. व्यवस्था4: 1 (तिर 6th ,), 2,9(तिर :), 29-31, 35
1 अब, हे इस्राएलका हो! मैले सिकाएको विधिहरू तथा आदेशहरू सुन। तब तिनीहरू बाँच्नेछौ। तब तिमीहरू जान सक्छौ तिमीहरूका पिता-पुर्खाहरूका परमेश्वर परमप्रभुले दिनु भएको भूमि अधिकारमा लिन सक्छौ।
4. इजकिएल 1 : 1 (हो गई),3(तिर 1st ,)
1 अब यो भयो...
3 परमप्रभुको वचन इजकिएल पूजाहारीहरूसम्म स्पष्ट आए
5. इजकिएल2:3(तिर:), 4-6 (तिर 4th ,)
4 म तिमीलाई तिनीहरू विरूद्ध केही भन्नको निम्ति पठाउँदैछु। तर तिनीहरू एकदमै हठी छन्। तिनीहरू कठोर हृदयका छन्। तर तिमीले तिनीहरूसँग कुरा गर्नु पर्नेछ। तिमीले भन्नु पर्छ, परमप्रभु हाम्रा मालिकले यो कुराहरू भन्नुहुँदैछ।
5 तिनीहरूले तिम्रो कुरा सुन्नेछन् वा सुन्नेछैनन् किनभने तिनीहरू बिद्रोहीहरू हुन्। तर तिमीले ती कुराहरू भन्नुपर्छ ताकि उनीहरूले बुझ्न सकुन् कि तिनीहरूको माझमा एक जना अगमवक्ता छन्।
6 हे मानिसको छोरो! तिनीहरू सँगनडराऊ। तिनीहरू जे भन्छन् त्यसको निम्ति नडराऊ।
6. इजकिएल 18 :4(तिर:), 27 (कहिले), 30, 31 (तिर:), 32 (यसैले)
27 ...यदि कुनै पापी बद्लिन्छ अनि राम्रो तथा न्याय-प्रिय बनिन्छ भने उसले आफ्नो प्राण बँचायो! उ जीवित बाँच्छ!
30 किन? किनकि इस्राएलको परिवारलाई, म प्रत्येक मानिससँग त्यही प्रकारले न्याय गर्नेछु जस्तो त्यो मानिसले कर्म गर्ने छ।” परमप्रभु मेरो मालिकले यी कुराहरू भन्नुभयो “यसकारण मसित आऊ! पाप गर्न छोड! ती डरलाग्दा चीजहरूले (मूर्ति) तिमीलाई पाप गर्नु नलावोस्।
31 ती सबै डरलाग्दा चीजहरू जुन तिमीले बनायौ, फ्याँकि देऊ, तिनीहरूले तिमीलाई खाली पाप गराउँछ। आफ्नो हृदय र आत्मा बद्लिगर! इस्राएलका मानिसहरू, तिमी आफूलाई किन मर्न दिन चाहन्छौ?
32 ...दया गरि फर्केर आऊ अनि बाँच!
7. मीका6: 8
8. मत्ती4: 23
9. मत्ती5: 2, 17-20
10. लूका 12 : 1 (होसियार), 2, 4, 5
1 तिमीहरू फरिसीहरूको खमीरदेखि होशियार बस। मेरो भन्नुको अर्थ तिनीहरूको कपटीपनामा होशियारी बस।
4 त्यसपछि येशूले मानिसहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई भन्दछु, ए मेरा साथीहरू! मानिसहरूदेखि नडराऊ। मानिसहरूले शरीरको हत्या गर्न सक्छन्, तर त्यो भन्दा वेशी तिनीहरूले केही गर्न सक्तैन।
11. लूका 13 : 10-14 (तिर 2nd ,), 15 (तिर 2nd ,), 16 (हुनु पर्छ), 17, 20, 21
12 जब येशूले उसलाई देख्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो, ए नारी, तिमी आफ्नो रोगबाट मुक्त भयौ।
15 प्रभूले उनलाई भन्नुभयो, तिमीहरू कपटी हौ। तिमीहरू सबैले तिमीहरूको गोठ अथवा गधा खोलेर गोरू अथवा तवेलाबाट तिनीहरूलाई पानी पियाउन लैजान्छौ। तिमीहरू यो विश्रामको दिन पनि गर्छौ?
16 ...यो स्त्री जसलाई मैले निको पारें ऊ हाम्रै यहूदीकी छोरी हुन्। तर शैतानले उसलाई अठाह र्वषसम्म बाँधेर राख्यो। के विश्रामको दिन उसको बन्धनबाट छुटाउने काम ठीक थिएन?
20 येशूले फेरि भन्नु भयो, ‘म परमेश्वरको राज्यलाई केसित तुलनागरूँ?
21 त्यो खमिर जस्तो हो, जो एउटी आइमाईले एउटा ठुलो भाँडोमा आँटासँग रोटी बनाउन मिसाउँछे। त्यो खमिरले सबै मुसेको आँटालाई फुलाउँछ।
12. 1 कोरिन्थी5:6(चिन्छु),7(तिर 2nd ,), 8
6 थोरै खमीरले जम्मै डल्ला नै खमीरी बनाउँछ यो जानेकै छौ।
13. 1 कोरिन्थी 3: 16, 18, 19 (तिर 1st.)
19 किन? किनभने परमेश्वर समक्ष यो संसारको ज्ञान मूर्खता हो। धर्म शास्त्रमा यस्तो लेखिएको छ। उहाँले ज्ञानी व्यक्तिहरूलाई तिनीहरूकै आफ्नो चलाकीमा फसाउनु हुन्छ।
14. 1 थिस्सलोनिकी5: 5, 6, 16-18 (तिर:), 19-21, 23, 24, 28
आत्मा भनेको पदार्थ हो, जीवन, र मानिसको बुद्धिमत्ता, जुन व्यक्तिकृत छ, तर त्यसमा छैन। आत्माले कहिले पनि आत्मालाई तुच्छ ठान्दैन।
आत्मा, वा आत्मा, परमेश्वर हुनुहुन्छ, अपरिवर्तनीय र अनन्त; र मानिस एकसाथ बस्छ र आत्मा, भगवान प्रतिबिम्बित गर्दछ, किनकि मानिस परमेश्वरको स्वरूप हो।
के तपाईं "आफ्ना परमप्रभु परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदय, र आफ्नो सारा प्राण र आफ्नो सारा दिमागले प्रेम गर्नुहुन्छ"? यस आदेशमा धेरै सामूहिक सनसनी, स्नेह, र पूजाको आत्मसमर्पण समावेश छ। यो इसाई धर्मको एल डोराडो हो। यसमा जीवन विज्ञान शामिल छ, र आत्माको ईश्वरीय नियन्त्रणलाई मात्र मान्यता दिन्छ, जसमा आत्मा हाम्रो मालिक हो, र भौतिक ज्ञान र मानवको कुनै ठाउँ हुँदैन।
येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई फरिसी र सदुकीहरूको खमिरदेखि होसियार रहन आज्ञा गर्नुभयो, जसलाई उहाँले मानव शिक्षाको रूपमा परिभाषित गर्नुभयो। "खमिर" को उखान हो, जुन एउटी आइमाई ले खान्छिन् र पूरै खमिर नहोउन्जेलसम्म तीनओटा खाना पकाउँछिन्, "आत्मिक खमिरले ख्रीष्टको विज्ञान र यसको आत्मिक अर्थलाई दर्शाउँछ भन्ने कुरालाई जोड दिन्छ - यो एक माथिबाट माथि उल्लिखित कुरा हो। केवल चित्रणको धार्मिक र औपचारिक अनुप्रयोगहरू।
एक सानो खमिरले सम्पूर्ण गांठलाई खमिरो बनाउँछ। क्रिश्चियन विज्ञानको एक सानो समझले मैले यसको बारेमा भनेको सबैको सत्यता प्रमाणित गर्दछ।
फरिसीहरूले ईश्वरीय इच्छा जान्न र सिकाउने दाबी गरे, तर तिनीहरूले केवल येशूको उद्देश्यको सफलतामा बाधा पुर्‍याए। समेत उनका धेरै विद्यार्थीहरू उनको बाटोमा उभिए। यदि मास्टरले विद्यार्थी लिने थिएनन् र परमेश्वरको नदेखिने सत्यताहरू सिकाएका भए उनी क्रूसमा टाँगिने थिएनन्। आत्मालाई पदार्थको पकडमा राख्न दृढ स .्कल्प भनेको सत्य र प्रेमको सताउने हो।
"उहाँसँग डराउनुहोस् जो नरकमा आत्मा र शरीर दुबैलाई नाश गर्न सक्षम छ," येशूले भन्नुभयो। यस पाठको ध्यानपूर्वक अध्ययनले देखाउँदछ कि यहाँ आत्मा शब्दको अर्थ गलत अर्थ वा भौतिक चेतना हो। यो आज्ञा रोम, शैतान वा परमेश्वरबाट नभई पापको होशियार हुनुपर्दछ। बिमारी, पाप, र मृत्यु जीवन वा सत्यको सहमिति होइनन्। कुनै कानून तिनीहरूलाई समर्थन गर्दैन। उनीहरूसँग परमेश्वरसँग कुनै सम्बन्ध छैन उनीहरूको शक्ति स्थापित गर्न।
इसाई वैज्ञानिकहरु भौतिक संसारबाट बाहिर आउन र पृथक हुन प्रेरितको आदेशको निरन्तर दबावमा बस्नु पर्छ।
क्रिश्चियन साइन्सका विद्यार्थीहरू, जसले यस पत्रबाट सुरू गर्दछन् र आत्माबिना सफल हुन सोच्दछन्, कि त उनीहरूको विश्वासको जहाज ध्वस्त पार्नेछ वा दुःखको रूपमा विचलित हुनेछन्।
हामी ईश्वरीय प्रकृतिलाई समेट्छौं र अनुच्छेदमा आराधना गर्छौं र उहाँलाई बुझ्दछौं र उहाँलाई प्रेम गर्छौं, शरीरका लागि युद्ध नगरी, तर हाम्रो भगवानको सम्पन्नतामा रमाउनेछौं। धर्म तब हृदयको हो, शिरको होइन।
हामी आध्यात्मिक तवरमा उपासना गर्छौं, जसरी हामी भौतिक रूपमा उपासना गर्न छाड्छौं। आध्यात्मिक श्रद्धा भनेको इसाईमतको आत्मा हो।
युग बित्छ, तर सत्यको खमिर काममा छ। यसले त्रुटिको सम्पूर्ण समूहलाई नष्ट गर्नुपर्दछ, र त्यसकारण मानिसका आत्मिक स्वतन्त्रतामा सदासर्वदा महिमा हुनुपर्दछ।
कुराकानीले पाप वा बिरामी विरुद्ध सही प्रयास गर्न को लागी कुनै विरोध गर्न सक्दैन किनकि पदार्थ जड, दिमागुन हो। साथै, यदि तपाईं आफैं बिरामी परेको विश्वास गर्नुहुन्छ भने, तपाईं यो गलत विश्वास र कार्यलाई शरीरबाट बाधा बिना परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ।
पाप, रोग, वा मृत्युको लागि कुनै पनि आवश्यकतामा विश्वास नगर्नुहोस्, (यो तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ) कि भगवानले कहिल्यै पनि तथाकथित भौतिक कानूनको आज्ञापालनको आवश्यकता पर्दैन, किनकि त्यस्तो कानून अवस्थित छैन।
13. 119 : 29 (क्रिश्चियन)-6
क्रिश्चियन विज्ञान आत्मा र शरीर को लागी सम्बन्ध को उल्टो र मन को शरीर सहायक नदी बनाउँछ। यो मानिससँग छ, जो आरामदायी दिमागको नम्र नोकर मात्र हो, यद्यपि यो सीमित अर्थमा अन्यथा देखिन्छ। तर हामीले यो कहिले पनि बुझ्न सक्दैनौं जब हामी यो जान्दछौं कि आत्मा शरीरमा वा दिमागमा छ र यो मानिस गैर-बुद्धिमा सामेल छ। आत्मा, वा आत्मा, परमेश्वर हुनुहुन्छ, अपरिवर्तनीय र अनन्त; र मानिस एकसाथ बस्छ र आत्मा, भगवान प्रतिबिम्बित गर्दछ, किनकि मानिस परमेश्वरको स्वरूप हो।
ढिलो होस् वा चाँडो हामी यो जान्न सक्दछौं कि मानवको सीमित क्षमताको फ्याटरहरू भ्रमले भ्रममा रहेको छ कि ऊ आत्माको सट्टामा आत्मामा नभई शरीरमा बस्दछ।
कुराले आत्मालाई व्यक्त गर्दैन। परमेश्वर असीम सर्वव्यापी आत्मा हुनुहुन्छ। यदि आत्मा सबै कुरा हो र जताततै छ, के र कहाँ छ? याद गर्नुहोस् कि सत्य त्रुटि भन्दा ठूलो छ, र हामी थोरैमा ठूलो राख्न सक्दैनौं। आत्मा आत्मा हो, र आत्मा शरीर भन्दा ठूलो छ।
आत्मासँग मानिसजातिलाई आशिष दिन असीम संसाधनहरू छन्, र आनन्द अझ सजिलै प्राप्त हुनेछ र आत्मामा खोजेमा हाम्रो पालनमा अझ सुरक्षित हुनेछ। उच्च रमाइलो एक्लो जीवनले अमर मानिसको लालसालाई सन्तुष्ट पार्न सक्छ। हामी व्यक्तिगत भावनाको सीमाहरू भित्र आनन्दको घेरो लिन सक्दैनौं। इन्द्रियहरूले कुनै वास्तविक आनन्द प्रदान गर्दैनन्।
मानव स्नेह मा राम्रो को दुष्ट मा जानवर भन्दा आध्यात्मिक र आध्यात्मिक हुनु पर्छ, वा खुशी कहिल्यै जीत हुनेछ।
जब मानव विचार एक चरणबाट अर्को सचेत दु: ख र पीडाविहीनता, दु: ख र आनन्द, डर बाट आशा र विश्वास देखि समझ को रूप मा एक परिवर्तन हुन्छ - दृश्य प्रकट अन्तिममा भौतिक आत्मा द्वारा संचालित मानिस हुनेछ, भौतिक भावना द्वारा छैन।